सर्वदलीय बैठक छोडेर किन हिडे देउवा ? यस्ताे छ कारण — Sanchar Kendra
१प्रधानमन्त्री ओली र वामदेव गौतमबीच वालुवाटारमा १ घण्टा भेटवार्ता
२प्रधानमन्त्री ओली र गौतम
३ओलीले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाए
४ओली समूहको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराई
५PM calls cabinet meeting at5pm today
७प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
८ओली-प्रचण्डसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने नगर्नेबारे कांग्रेसले गर्यो यस्तो निर्णय
१०गृहले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई किन जारी गर्यो यस्तो सर्कुलर
१२पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता जोशीलाई मस्तिष्कघात, उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल पुर्याइयो, अवस्था गम्भीर
सर्वदलीय बैठक छोडेर किन हिडे देउवा ? यस्ताे छ कारण
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति लिखित धारणा राखेर बाहिरिएका हुन् ।
उनी बैठकबाट बाहिरिएपनि बैठकमा के धारणा राखे भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । अर्काे महत्वपूर्ण काम छ भन्दै देउवा बैठकबाट निस्किएकाे स्राेतले बतायाे । पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अहिले बालुवाटारमा जारी छ ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. प्रकाशशरण महत बैठकमै छन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय मुलुकमा मौलाएको गणतन्त्र विरोधी गतिविधिहरु र व्याप्त हिंसाको विरुद्धमा एक जुटभएर अघि बढ्न सबैमा आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटरमा जारी सर्वदलीय वैठकमा नेताहरुलाई स्वागत गर्दै उनले आजको छलफलका विषयमा प्रष्ट पारेका थिए । बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गर्नुपर्ने एजेन्डाबारे प्रकाश पारेका थिए। एकातिर नेकपाभित्रको उत्कर्षमा पुगेको विवाद छ भने अर्कातिर दैनिक गणतन्त्र विरोधी प्रदर्शनहरु भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका हुन् ।
वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज छलफल गरिने विषयबारे प्रष्ट पारेका थिए । कोभिड– १९ को नियन्त्रण, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा, संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिहरूको विरोधमा एकजुट हुन सबैमा आग्रह गरेका हुन् । सर्वदलीय बैठकअघि आज विहानै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले लिपुलेक र कालापानी मिचेको विषयमा छलफल गर्न वैशाख ३१ मा पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यतिबेला पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटेको थियो ।